पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटन : बोतलमा थाप्ने, भण्डारण गृहमा खन्याउने ! – Nepal's No. 1 Digital Newspaper
पेट्रोलियम पाइपलाइन उदघाटन : बोतलमा थाप्ने, भण्डारण गृहमा खन्याउने !
A view of the Motihari-Amlekhgunj depot of Nepal Oil Corporation, in Bara, on Tuesday, April 30, 2019. Photo: Puspa Khatiwada/THT
२४ भदौ, काठमाडौं । नेपाल-भारत पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना आजबाट औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा आउने भएको छ । भारतको मोतिहारीबाट बाराको अमलेखगन्जसम्म बिछ्याइएको पाइपलाइन परियोजनाको परीक्षणपछि उदघाटन गर्न लागिएको हो ।
यो पनि पढ्नुहोसअमलेखगञ्जमा यस्तो छ पेट्रोलियम पाइपलाइन उद्घाटनको तयारी (फोटोफिचर)